एकैपटक ३० सचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे?, सूचीसहित ! | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
एकैपटक ३० सचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे?, सूचीसहित !
Published On : २३ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०८:५४
काठमाडौं : सरकारले एकैपटक ३० सचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ३० सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयदेखि काठमाडौं महानगरपालिकासम्म नयाँ सचिव सरुवा भएर आएका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पनि नयाँ सचिव सरुवा भएर आएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा विनोद केसी आएका छन् भने उपराष्ट्रपतिको कार्यलयमा शंकरप्रसाद अधिकारी आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा दुई सचिव सरुवा भएर आएका छन्। गृहमन्त्रालयको सचिवमा प्रेमकुमार राई सरुवा भएर आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा राजन खनाल आएका छन्। त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकामा यादवप्रसाद कोइराला आएका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा महेश्वर न्यौपाने आएका छन्।
कुन कार्यालयमा को आए ?
विनोद केसी, राष्ट्रपतिको कार्यालय शंकरप्रसाद, अधिकारी उपराष्ट्रपतिको कार्यालय लालशंकर घिमिरे, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय लक्ष्मणप्रसाद मैनाली, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रेमकुमार राई, गृह मन्त्रालय राजन खनाल, अर्थ मन्त्रालय महेन्द्रमान गुरुङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मोहनकृष्ण सापकोटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खगराज बराल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विष्णुप्रसाद लम्साल, रक्षा मन्त्रालय मधुसूदन अधिकारी, भौतिक मन्त्रालय पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय युवकध्वज जिसी, कृषी भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय विश्वनाथ ओली, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कृष्णराज बिसी, खानेपानी मन्त्रालय गजेन्द्रकुमार ठाकुर, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय सञ्जय शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई महेश्वर न्यौपाने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग देवेन्द्र कार्की, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय अर्जुनकुमार कार्की, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मधुप्रसाद रेग्मी, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय महेश दाहाल, श्रम तथा रोजगार विभाग अनिल ठाकुर, महिला आयोग शरदचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोग भूपेन्द्रप्रसाद पौडेल, सूचना आयोग यादवप्रसाद कोइराला, काठमाडौं महानगरपालिका